Sida Loo Hagaajiyo Ciladda Xusuusta WordPress-ka ee Qaladka ah iyadoo la Kordhinayo Xadka Xusuusta PHP ee Boggaga | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Hagaajiyo Ciladda Xusuusta WordPress-ka ee daashay iyadoo la kordhinayo Xadka Xusuusta PHP ee Boggaga
Sida Loo Hagaajiyo Ciladda Xusuusta WordPress-ka ee daashay iyadoo la kordhinayo Xadka Xusuusta PHP ee Boggaga
Sida aad ogtahay, WordPress waxaa lagu dhisay iyadoo la isticmaalayo PHP. Luuqaddan barnaamij-samaynta ayaa ah mid si cajiib ah u dabacsan, laakiin sidoo kale waxay leedahay cillado dhawr ah. Tusaale ahaan, haddii aanad u qoondayn xusuusta kugu filan rakibaada WordPress, waxaa laga yaabaa inaad bilowdo inaad gasho khaladka "PHP Memory Exhausted" marmar.
Marka la soo koobo, khaladkan waxa uu ka dhigan yahay in server-kaagu aanu u qoondayn khayraad ku filan WordPress si uu u fuliyo qoraalada PHP ee uu u baahan yahay in uu si sax ah u shaqeeyo. Arintani waxay si xun u saameyn kartaa shaqada goobtaada, laakiin waxaa jira dhowr siyaabood oo aad u hagaajin karto oo aad xitaa uga hortagi karto.
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa sida loo hagaajiyo dhibaatada xusuusta daalan adigoo kordhinaya xadkaaga xusuusta PHP. Si kastaba ha ahaatee, marka hore, aan ka hadalno sida loo garto qaladkan iyo waxa loola jeedo!
Waa maxay sababta aad u aragto cilad xaddidan xusuusta WordPress ee boggaaga
Sidaan horey u soo sheegnay, qaladka xaddidaadda xusuusta PHP waxay ka dhigan tahay inaadan u qoondeyneynin kheyraad ku filan rakibaada WordPress si uu si sax ah ugu shaqeeyo. Dhibaatadu inta badan waxay isu keentaa fariin sida:
Ha ka baqin kelmadda “dhimasho,” in kastoo. Mareegtaada ma jabin, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad wax ka bedesho rakibaadda WordPress haddii aad rabto inuu si sax ah u shaqeeyo. Gaar ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad kordhiso xadka xusuustaada PHP.
Xagga "xadka xusuusta PHP," waxaan ula jeednaa qaddarka xusuusta server-ka ee loo qoondeeyay socodsiinta qoraallada PHP. Sida caadiga ah, lambarkaasi waa inuu ahaadaa 64 MB ama ka badan. Xaaladaha intooda badan, 64 MB ayaa ka badan ku filan, si kastaba ha ahaatee.
Inta badan server-yada martigelinta waxay ku siinayaan xasuus aad uga badan taas, markaa kordhinta xajmiga xusuusta ee PHP waa inaysan si xun u saameynin waxqabadka boggaaga si kastaba ha noqotee. Xaqiiqdii, ilaa aad isticmaalayso martigeliyaha mareegaha raqiis ah ama aad gacanta ku dejiso WordPress, xadka xusuustaada PHP waa inaanu noqon arin gabi ahaanba ah.
Waxaad si fudud u hubin kartaa si aad u aragto waxa xadka xusuustaada PHP yahay adiga oo gelaya dashboardkaaga WordPress oo aad u socoto Qalabka> Caafimaadka Goobta> Macluumaadka. Marka xigta, waxaad riixi kartaa Server tab oo raadi Xadka xusuusta PHP gelitaanka.
gudahood ah Server tab, waxaad sidoo kale hubin kartaa macluumaadka kale sida kaaga Nuqulka PHP iyo Waqtiga xaddidan ee PHP. Doorsoomka dambe, oo ku jira ilbiriqsiyo, ayaa qeexaya inta ay tahay in qoraallada PHP ay fuliyaan ka hor inta aysan waqtigu dhammaan.
Hadda, aynu diiradda saarno xadka xusuusta PHP. Sida aad arki karto, tusaalaha kor ku xusan wuxuu leeyahay xad aad u sarreeya, taas oo macnaheedu yahay in website-ka aysan u badneyn inuu galo qaladka xusuusta WordPress.
Haddii goobtaadu leedahay xaddid xusuusta yar (<64 MB), waxay ku jirtaa dantaada inaad kordhiso. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad sidaas ku sameyn karto.
U qaado Mareegtaada WordPress Heerka Labaad
Haddii aad u baahan tahay caawimo dhex maraaya guddida kantaroolka martigelinta ee shabakadaada, hagaajinta khaladka, ama helitaanka plugin sax ah, waan ku caawin karnaa! Isdiiwaangeli si aad u hesho maqaalkeena bishiiba mar si aadan maqaal u seegin
Sida loo Xaliyo Ciladda Xadka Xusuusta ee WordPress (2 Hab)
Ilaa hadda Khaladaadka WordPress Tag, tani waxay leedahay sabab cad iyo xal. Uma qoondaynaysid xasuus kugu filan rakibaada PHP, markaa waxaad u baahan tahay inaad kordhiso tiradaas. Qaybtan, waxaan ku dul mari doonaa laba hab oo aad isticmaali karto: mid farsamo gacanta ah iyo mid u baahan boorsadaada.
1. Kordhi xusuusta PHP ee loo qoondeeyay Mareegahaaga gacanta
WordPress waxa uu awood kuu siinayaa in aad gacanta ku sheegto cabbirka xusuusta ee la ogolyahay adiga oo wax ka beddelaya mid ka mid ah labada fayl: .htaccess iyo Conciliation config.php. Si kastaba ha ahaatee, bedelida rakibaada WordPress .htaccess Faylku wuxuu u horseedi karaa khaladaad goobta oo dhan ah maadaama faylkaas uu xukumo sida uu ula falgalo server-kaaga.
Kordhinta xadka xusuustaada PHP iyada oo loo marayo Conciliation config.php waa, inta badan, doorashada ugu badbaado badan, aad ayayna u fududahay in la sameeyo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa macmiilka Habboon ee Wareejinta Faylka (SFTP). sida FileZilla oo aad isticmaali karto si aad ugu xidhidhdo mareegahaaga.
waxaad Marka ka gal mareegahaaga SFTP, fur WordPress xidid gal oo raadi Conciliation config.php gudaha u gal.
Fur faylkaas adigoo isticmaalaya tifaftiraha qoraalka, oo waa inaad aragto wax sidan oo kale ah:
Si loo kordhiyo xadka xusuusta PHP, waxaad si fudud ugu dari kartaa hal xariiq oo kood meel kasta ka dib sumadda iyo ka hor qaybta faylka akhriya “/* Taasi waa dhan, jooji tafatirka! Blogging farxad leh. */”.
Tani waa line code in lagu daro:
qeex ('WP_MEMORY_LIMIT', 'XXXM');
Waxaad u baahan doontaa inaad bedesho "XXX" doorsoome ku dhex jira xariiqaas oo leh xaddiga xusuusta aad rabto inaad u qoondayso PHP. Sidii aan horayba u soo sheegnay, ugu yaraan ugu yaraan waa 64 MB.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale labanlaaban kartaa lambarka si aad si badbaado leh ugu ciyaarto ama aad u kordhiso xitaa intaa ka sii badan. Tusaale ahaan, haddii aad dejiso xadka xusuusta PHP ee 256 MB, waxay u ekaan doontaa sidan:
qeex ('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');
Marka lagugu dhejiyo lambar, ku keydi isbedelada Conciliation config.php oo xidh tifaftiraha. Hadda ku soo celi dashboardkaaga WordPress oo u gudub Qalabka> Caafimaadka Goobta> Macluumaadka> Adeegaha si loo eego in isbedelku dhacay.
Xaaladaha qaarkood, ku dhawaaqida xadka xusuustaada PHP gacanta ma shaqayn doonto sababtoo ah ma haysatid rukhsadaha lagama maarmaanka ah si aad u bedesho qiimahaas. Haddii aadan gacanta ku hagaajin karin cabbirka xusuusta WordPress, taasi waxay kaa tagaysaa hal ikhtiyaar oo kale.
2. Kor u qaad Qorshaha Martigelinta ee Mareegtaada
Caadi ahaan, haddii aad isticmaasho bixiye martigelinaya WordPress oo hufan, uma baahnid inaad ka walwasho kordhinta xadka xusuustaada PHP. Hal digniin ayaa ah haddii aad tahay iyadoo la isticmaalayo martigelin la wadaago, waxay u badan tahay inaad la kulmi doonto kheyraad xaddidan. Markaa haddii aad la kulanto khaladkan, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad u cusboonaysiin lahayd qorshe martigelineed oo ka wanaagsan.
Casriyeynta xirmadaada martigelinta caadi ahaan waxay keeni doontaa korodhka xusuusta PHP ee la heli karo. Taasi waxay la macno tahay inaad aad uga yar tahay inaad gasho khalad xaddidan xusuusta WordPress. Waxa kaliya ee xaddidaya waa miisaaniyadaada.
Haddii aadan cusboonaysiin karin qorshayaasha martigelinta hadda, waxaa laga yaabaa inay mudan tahay inaad la xiriirto kooxda taageerada bixiyahaaga oo aad aragto inay kordhin karaan xadka xusuusta PHP dhamaadkakooda. Haddii aysan awoodin, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii U beddelo martigeliyaha WordPress ka wanaagsan kaas oo bixiya xaddidaad sare oo xusuusta PHP ah oo ku saabsan qorshooyinka la awoodi karo.
Ka bood Cadaadiska
Ka fogow cilad-raadinta marka aad iska diiwaangeliso DreamPress. Khubarada WordPress ee saaxiibtinimada leh ayaa diyaar ah 24/7 si ay uga caawiyaan xallinta mashaakilaadka bogga - weyn ama yar.
Ma doonaysaa Talooyin badan oo qaladka WordPress ah?
Marka aad kordhiso xusuusta PHP ee degelkaaga WordPress, waxaan kaa caawin karnaa wax ka qabashada arrimaha kale. Waxaan diyaarinay dhowr casharro si ay kaaga caawiyaan xallinta fariin kasta oo qalad ah:
Sida loo Hagaajiyo Khaladaadka Guud ee WordPress
Sida loo xalliyo Shaashadda Cad ee Dhimashada ee WordPress (WSoD)
Sida loo Hagaajiyo 500 ee Cilada Server-ka Gudaha ee WordPress
Sida loo Hagaajiyo Khaladaadka Syntax gudaha WordPress
Sida loo hagaajiyo WordPress-ka oo aan dirin arrin email ah
Sida loo Hagaajiyo Ciladda Samaynta Database Connection in WordPress
Sida loo hagaajiyo Qaladka WordPress 404 Lama Helin
Sida loo Hagaajiyo Qoraalka Cad iyo Badhamada maqan ee Tifaftiraha Muuqaalka WordPress
Sida loo hagaajiyo dhinaca hoose ee cilada nuxurka ee WordPress (3 Tallaabo)
Waxa la sameeyo marka lagaa xiro Aagga Maamulka WordPress
Sida loo Hagaajiyo Bogga Galitaanka WordPress ee Soo kicinta iyo Dib u habeynta Arrinta
Ma doonaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan maamulka goobta WordPress? Fiiri annaga Casharrada WordPress, ururin hagayaal loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad u dhex marato dashboardka WordPress sida khabiir.
Kordhinta Xadka Xusuusta PHP
Ku socodsiinta qalad dilaa ah PHP waxay noqon kartaa walwal, laakiin daruuri maaha sabab walaac leh. Barashada sida loo kordhiyo xadka xusuusta PHP waa mid fudud haddii aadan ku fikirin isticmaalka macmiilka SFTP oo aad ku darto hal xariiq oo kood ah mid ka mid ah faylalka asaasiga ah ee WordPress.
Beddelku waa in la cusboonaysiiyo qorshahaaga martigelinta ama aad doorato bixiye ka wanaagsan. Inta badan xulashooyinka martigelinta saaxiibtinimo ee WordPress-ku waxay bixiyaan xad sare si caadi ah, markaa waligaa ma geli doontid qaladka xusuusta PHP ee daalan mar kale.
Haddii aad diyaar u tahay inaad adeegsato martigeliyaha mareegaha loo habeeyay mareegaha WordPress, eeg annaga Baakadaha martigelinta DreamPress! Waxaan bixinaa habayn la hagaajiyay oo WordPress ah, si aad wakhti yar u lumiso xallinta khaladaadka iyo wakhti badan oo aad ka shaqeyso shabakadaada.
Sidee GoDaddy Pro u "ballaartay" Mojokooda
Muxuu Google Chrome FLoC ka yidhi xayeysiisyada la beegsaday